Turkey High Speed ​​oo High Speed ​​Railway Lines iyo maps | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTurkey High Speed ​​oo High Speed ​​Railway Lines iyo maps
Turkey High Speed ​​oo High Speed ​​Railway Lines iyo maps
11 / 11 / 2019 06 Ankara, 35 Izmir, 38 Kayseri, 42 Konya, 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Khariidadaha, TURKEY
turkey, xawaaraha sare iyo khadadka Tareenada degdeg ah iyo khariidado
Turkey ayaa High Speed ​​iyo High-Speed ​​Railway Line iyo maps; Dhismaha wadooyinka-xawaaraha-xawaaraha-dheer, Istanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir iyo waddooyinka Ankara-Konya waxaa loo go'aamiyaa inay yihiin shabakadda xudunta u ah. qorsheeyay isku 15 magaalooyinka waaweyn ee tareen-xawaaraha sare ugu horrayn Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya Konya-Istanbul iyo Ankara-Istanbul on line ayaa bilaabay in ay maamulka YHT iyo Turkey ayaa noqday dalka siddeedaad lixaad ee Yurub ee dunida hawlgal tareen-xawaaraha sare. Iyadoo la raacayo bartilmaameedyada, dhismaha Xariiqa Xawaare Xawaare Sare ee 1.213 km ayaa la dhammeystirey. Ankara Sivas, Ankara-İzmir Speed ​​Speed ​​Railway ayaa socda. Kayseri-Yerköy Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Tareenka way sii socdaan.
Thanks to mashaariicda socda iyo kuwa qorshaysan, waddankeenu wuxuu ku dhisan yahay shabakado xawaare sare leh oo xawaare dheereeya laga bilaabo bari ilaa galbeed iyo waqooyiga ilaa koonfurta. Sidan, GSTs waxay dib-u-habeyn ku sameyn doontaa fikradda marin u helka iyadoo la isku xiro magaalooyinka waaweyn lana abuuro dariiq cusub oo horumarineed oo heer gobol ah iyadoo lagu xirayo magaalooyinkeenna dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda, ma ahan qadka tareenka.
Map of Turkey in Tareenku Fast
Mashruuca Wadada Xawaare Sare ee Ankara - Istanbul
Qeybta Ankara-Eskişehir, oo ahayd marxaladi ugu horreysay ee Mashruuca Xawaaraha Xawaare ee Ankara Istanbul, waxaa la geliyay sannadka 2009 si loo yareeyo waqtiga safarka ee u dhexeeya Ankara-Istanbul, labada magaalo ee ugu waaweyn dalkeenna, si loo abuuro fursado gaadiid oo deg deg ah, raaxo leh oo aamin ah sidaas darteedna la kordhiyo saamiga qaybta tareenka ee gaadiidka. Hawlaha loo yaqaan 'YHTs' waxay ahaayeen dhiirigelinta ugu weyn ee rakaabka tareenka iyagoo u oggolaanaya muwaadiniinta inay u safraan inta u dhaxaysa Ankara iyo Eskişehir sida ugu dhakhsaha badan, uguna raaxada badan uguna ammaansan. Muwaadiniintayadu hadda waxay xasuusteen safarkooda tareenka ee illaaway.
Dhismaha qaybta Eskişehir-Pendik sidoo kale waa la dhammeeyay 25na waxaa la galiyay adeegga Julay 2014. Iyada oo la raacayo Mashruuca Xawaaraha Xawaare ee Ankara-Istanbul oo leh dherer ugu badan oo ah 513 km / h dhererka jidka isku xirka 250 km, safarka u dhexeeya labada magaalo ee waaweyn 3 saacadood 55 min. Waxa uu ahaa.
Khadadka Xawaaraha Xawaareha ee Ankara-Istanbul ayaa la dhexgali doona Marmaray waqti gaaban waxayna bixin doontaa gaadiid aan kala go 'lahayn oo ka yimaada Yurub oo Aasiya taga. Mashruucan, kaas oo isku xiraya labada magaalo ee ugu waaweyn dalkeenna, is-dhexgalka bulshada, dhaqaalaha iyo dhaqanka ee u dhexeeya magaalooyinku wuu sii kordhayaa iyo waddankeenna, kaas oo ku jira hawsha xubin-ka-noqoshada Midowga Yurub, wuxuu diyaar u noqon doonaa EU-da kaabayaasha gaadiidkiisa.
Basaska u dhexeeya Eskişehir-Bursa oo leh isku xirka YHT iyo tareennada u dhexeeya Kütahya, Afyonkarahisar iyo Denizli ayaa bilaabay inay socodsiiyaan waxaana si aad ah hoos ugu dhacay waqtiyadii safarka ee magaalooyinkaas.
Turkey ayaa ku degdegay inuu xawaaraha yht'n fursadaha safarka YHT-daray in our gaadiidka 28 milyan oo muwaadiniin ah inay helaan Istanbul ayaa la soo bandhigay.
Wadada Xawaaraha Sare ee Ankara Istanbul
Mashruuca Wadada Xawaaraha Sare ee Ankara-Konya
Mashruuca Ankara-Konya YHT, oo ay garwaaqsadeen qandaraaslayaal maxalli ah oo leh shaqaale maxalli ah iyo kheyraad iska leh, ayaa la geliyay adeegga 2011. Polatlı, oo ku yaal Mashruuca Ankara-İstanbul, waxaa laga soocay koonfurta iyo wado tareen xawaare sare leh oo dhererkeedu badan yahay 212 km / h ayaa la dhisay.
Sidaas awgeed, Konya, oo ah caasimaddii ugu horreeysay ee Turkiga ee Anatolia iyo Ankara, oo ah caasimadda waddankeenna, waxay noqdeen kuwo aad isugu dhow. sidoo kale, Si loogu xiro Karaman, Antalya / gobolka Alanya iyo An-kara oo loo yaqaan 'YHTs', waxaa jira duullimaadyo isku xira NWT oo ka socda Konya.
Mashruuca kahor, tareenada caadiga ahi waxay isticmaalaan wadada Eskişehir-Kütahya-Afyon ee ka socota Ankara ilaa Konya.
Khadadka Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Ankara Konya
Mashruuca Wadada Xawaare Sare ee Ankara-Sivas
Dhismaha Ankara-Sivas YHT, oo ah mid ka mid ah dariiqyada ugu muhiimsan ee marinka tareenka isku xira Aasiyada Yar iyo Aasiyada Yar ee ku teedsan Wadada Silk, ayaa sii socota. Waxaa loogu talagalay in lagu dhex daro mashruuca tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars oo ay weheliso Jidadka tareenka xawaaraha dheereeya ee Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars.
Wadada tareenka ee Ankara-Sivas hadda waa 603 km, waqtiga safarkaana waa saacadaha 12. Mashruuca, kaas oo gaabin doona wakhtiga safarka ee u dhexeeya labada magaalo, ujeedadiisu tahay in la dhiso jid tareen xawaare sare leh oo leh laba layn, koronto, signaal ku habboon xawaaraha ugu sarreeya ee 250 km / h. Sidaa daraadeed, khadka ayaa la soo gaabin doonaa ilaa 198 km oo waqtiga safarka ayaa laga yareyn doonaa saacadaha 405 illaa saacadaha 12.
Wadooyinka Ankara-Istanbul, Ankara-Konya Xawaare-Xawaare Xawaare Sare ayaa sii wadaya dhismaha khadka tareenka ee Ankara-Izmir High-Speed ​​oo furitaanka howlgalka, kaas oo bixin doona isku xirka u dhexeeya bari iyo galbeedka dalkeenna, ahmiyada ay leedahay isku-xidhka NWT lama huraan in ay sii kordhayaan.
Khadadka Xawaare Xawaare Sare ee Ankara Sivas
Mashruuca Wadada Xawaare Sare ee Ankara-Izmir
Warshadaha, awooda dalxiiska iyo dekeda wadankeena oo leh 3. Dhismaha Mashruuca Xawaaraha Xawaaraha ee Ankara-İzmir, kaas oo la bilaabay in lagu sameeyo İzmir, magaalada ugu weyn, Manisa, Uşak iyo Afyonkarahisar-na ay kusii socdaan Ankara dariska la ah.
Wadada tareenka ee hadda ee Ankara-Izmir waa kiloomitir 824 oo waqtiga safarku waa ku dhawaad ​​saacadaha 14. Masaafada u dhaxaysa labada magaalo ayaa loo dhimi doonaa kilomitir 624 iyo waqtiga safarka ilaa 3 saacadood 30 daqiiqo.
Ankara İzmir Line Tareenka Xawaare Sare leh
Mashruuca Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Kayseri-Yerköy
Inta u dhaxaysa Kayseri iyo Yerköy, 250 km laba jibaaran, koronto iyo tareen xawaare sare leh ayaa la dhisi doonaa. Mashruuca Kayseri-Yerköy YHT waxaa lagu xiri doonaa khadka Ankara-Sivas YHT ee ka soo baxa magaalada Yerköy.
Hawlaha qandaraaska ee Kayseri-Yerköy Line Speed ​​Speed ​​Line ayaa sii socda.
Khadkii Xawaare Xawaare Sare Kayseri Yerköy
Ogeysiiska Soo iibsiga: Khadadka caadiga ah ee TCDD, tareenka xawaaraha sare…
Moovit, Gaadiidka Dadweynaha ee Khariidadaha Azure Microsoft…
Khariidadaha Waddooyinka ee Eskisehir Warshadaha
Ku farxay in carruurta laga dhigo khariidado ka timid Yandex…
Maareeyaha Guud ee TCDD Uygun, Tareenka Xawaaraha Sare iyo Sare…
Tareenka Xawaaraha Sare ee YHT - Xawaaraha Cusub ee Tareenka Cusub
Turkey, New Speed ​​Tareen Line Marka aad dhamaysid ...
Charter High Speed ​​Rail Mashaariicda for Advanced Turkey
Urban Rail Lines iyo Adeegyada dalka Turkiga ...
Wadooyinka waaweyn ee Shiinaha iyo buundooyinka xawaaraha xawaaraha sare…
Ogeysiinta Ugaarsiga: Isagoo wataya Khadka Xawaaraha Sare ee Ankara-Bursa…
10. Shirka Wadada Xawaaraha Sare ee Adduunka ee Ankara…
Wasiirka Aslan, Ankara-Sivas tareenka xawaaraha ku socda…
Ankara İzmir Khariidad Xawaare Sare leh
Khariidadda Xawaare Sare ee Ankara Konya
Khariidadda Xawaaraha Sare ee Ankara Sivas
Khariidadda Xawaaraha Sare ee Ankara-Istanbul
Ankara-Konya Tareenka Xawaaraha Sare
Mashruuca Tareenka High-Speed ​​Railway ee Ankara-Sivas
Kayseri Yerköy Khariidadda Xawaaraha Sare ee Xawaaraha
Mashruuca Wadada Xawaaraha Sare ee Kayseri Yerköy
Turkey ayaa High Speed ​​Railway Lines
Turkey ayaa High-Speed ​​Railway Lines
khadadka xadiidka xawaaraha sare
Turkey ayaa High Speed ​​Tareen Stations